Alps Switzerland: njirimara, geology, mmalite, ahịhịa na anụmanụ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 09/09/2021 08:32 | Geology
Otu n'ime usoro ugwu ama ama n'ụwa, nke dị na Europe, bụ Ugwu Switzerland. A na -ahụta ya dị ka ugwu kachasị ogologo na Europe niile ma gbatị ruo mba 8. Ọ gafere Austria, France, Germany, Monaco, Switzerland, Slovenia, Italy na Liechtenstein. Ugwu ndị a nwere ebe dị mkpa na mpaghara ala nke mba ndị a, na ọtụtụ omenala sitere n'ugwu a.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị njirimara, mbido na geology nke Alps Switzerland.
2 Geology nke Alps Switzerland
3 Mmalite na nhazi nke Alps Switzerland
Ọdịda ugwu ahụ nwere ịma mma dị ịtụnanya ma kpụzie ọdịbendị nke ọtụtụ mba. Okirikiri ala ndị a na -apụta n'ọtụtụ ugwu na obodo dị na mpaghara ahụ wee bụrụ ebe ndị njem na -ewu ewu. Ngalaba ndị a na -eme ime ski, ugwu na ime njem, ma na -anabata ihe karịrị otu nde ndị njem nleta kwa afọ.
Nke mbụ dị na mpaghara arc nke ihe karịrị kilomita 800 na ndịda ọwụwa anyanwụ Europe. Ọ gbatịrị site na mpaghara Mediterenian ruo mpaghara Adriatic. A na -ahụta ya dị ka isi nke sistemụ ugwu ndị ọzọ dịka Carpathians na Apennines. N'etiti ugwu ya niile, anyị nwere ike ịhụ Matterhorn, Monte Rosa Massif na Dom. Mont Blanc bụ ọnụ ọgụgụ ya kachasị elu, ma eleghị anya Matterhorn bụ nke a kacha mara maka ọdịdị ya. Njirimara ndị a niile na -eme ka Alps Switzerland bụrụ otu n'ime sistemụ ugwu ama ama n'ụwa.
Mmalite nke okwu Alps doro anya ugbu a. Ọ nwere ike si na Celt, nke pụtara ọcha ma ọ bụ ogologo. Okwu a sitere na Alps Latin, na -agafe French. Site mbubreyo Paleolithic ruo ugbu a, mpaghara Alps niile bụ ebe ọtụtụ agbụrụ biri. N'ọgbụgba ndụ ị nwere ike ịhụ ka Iso Ụzọ Kraịst siri gaa n'ihu na Europe na e hiwela ọtụtụ ebe obibi ndị mọnk n'ugwu. A na -ewu ụfọdụ n'ime ha n'ebe dị elu na obodo nwere ike ito na gburugburu ha.
Akụkọ ihe mere eme na -agwa anyị na ịbanye mpaghara mpaghara na ebe okpukperechi ndị ọzọ, E weere Alps Switzerland dị ka ihe mgbochi a na -apụghị imeri emeri. N'ihi ọtụtụ nnukwu mmiri na ebe dị omimi, a na -ewerekwa ha dị ka ebe dị ize ndụ. N'ikpeazụ na narị afọ nke XNUMX, teknụzụ nwere ike ikwe ka nyocha na nyocha.
Geology nke Alps Switzerland
Usoro ugwu niile nke Alps dị ihe karịrị otu puku kilomita na narị abụọ n'ogologo, ọ dịkwa na kọntinenti Europe. Ụfọdụ ọnụ ọnụ ya dị ihe karịrị mita 1.200 karịa oke osimiri yana enwere ihe karịrị glaciers 3.500. Oke snow dị ihe dị ka mita 2400, yabụ enwere ọtụtụ ebe maka njem nlegharị snow. Snow kpuchiri ọnụ ọnụ ya ruo mgbe ebighị ebi, na -akpụ nnukwu glaciers, na ịdị elu ya ka dị n'elu mita 3.500. A na -akpọ nnukwu glacier aha Aletsch.
A na-ahụta ya dị ka ntọala nke sistemụ ugwu ndị ọzọ, dị ka Alpine tupu ebe ugwu Jura dị. Akụkụ ụfọdụ nke oke ugwu ahụ gbasara Hungary, Serbia, Albania, Croatia, Bosnia na Herzegovina, na akụkụ Montenegro.
Site na echiche ala, anyị nwere ike kewaa oke ugwu a ka ọ bụrụ nke etiti, ngalaba ọdịda anyanwụ, na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Na nkebi nke ọ bụla na ngalaba dị iche iche ma ọ bụ otu obere ugwu. Geologically, anyị nwekwara ike ịmata ọdịiche dị na Alps ndịda Switzerland, nke ndagwurugwu Valtelina, Pusteria na Gailtal kewapụrụ na mpaghara ndị ọzọ. N'ebe ndịda ọdịda anyanwụ bụ Alps Maritime dị n'akụkụ Oké Osimiri Mediterenian, na -eme oke eke n'etiti France na Italy. N'ezie, Ọ maara nke ọma na Mont Blanc dị n'agbata France na Italy yana nwere glacier kachasị ogologo na France. Akụkụ ọdịda anyanwụ nke ugwu a gbadara na ndịda ọdịda anyanwụ Switzerland.
Ụfọdụ nnukwu osimiri dị na kọntinent Europe, dị ka Rhone, Rhine, Hainaut na Delaware, na -esite ma ọ bụ na -agafe Alps wee tọgbọ chakoo n'ime Oké Osimiri Ojii, Mediterenian na Oké Osimiri Ugwu.
Mmalite na nhazi nke Alps Switzerland
N'iburu nha nke oke ahụ, nhazi ya bụ akụkụ nke usoro dị mgbagwoju anya nke ihe omume ala. Ndị ọkachamara n'ihe gbasara ala kwenyere na ọ ga -ewe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ otu narị afọ iji ghọta ịdị njọ nke ihe ndị metụtara ala na -eduga na Alps Switzerland. Ọ bụrụ na anyị alaghachite ya na mbido ya, anyị nwere ike ịhụ na emebere nke mbụ n'ihi nkwekọrịta n'etiti efere Eurasia na efere Afrịka. Efere tectonic abụọ a emeela ka enweghị ntụkwasị obi na mbara ala na ịdị elu. Usoro a na -ewe abụọ ma ọ bụ karịa ka emechaa, na -ekpuchi oge ga -ewe ọtụtụ nde afọ.
A na -eme atụmatụ na mmegharị orogenic ndị a niile n'ikpeazụ malitere n'ihe dị ka nde afọ 300 gara aga. Efere Tectonic malitere itisa na ngwụcha Cretaceous. Nkwekọrịta nke efere tectonic abụọ a mere ka mmechi na iweda ọtụtụ akụkụ ala nke kwekọrọ n'oké osimiri Tethys nke dị n'etiti efere abụọ ahụ. Mkpuchi na imebe ya mere na Miocene na Oligocene. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ụdị nkume dị iche iche dị na mbadamba abụọ nke eriri ahụ, ọ bụ ya mere o ji bụrụ nke siri ike iji bulie ala wee kee oke ugwu a. Ha jisiri ike chọta akụkụ ụfọdụ nke oke osimiri oge ochie nke oke osimiri Tethys.
Ebumnuche ebumnobi nke ndị njem bụ ahịhịa na anụ ọhịa na mgbakwunye na ọmarịcha ala. E nwere ihe ndị e kere eke dị ndụ dị ka ọnụ ọnụ ugwu dị larịị, ndagwurugwu, ahịhịa ahịhịa sara mbara, oké ọhịa, na ụfọdụ mkpọda ugwu. Mgbaze nke mmiri kpụkọrọ akpụkọ akpụpụtala ọdọ mmiri ụfọdụ na elu mmiri dị jụụ, nke na -amasị mmepe nke ahịhịa na anụmanụ.
Ọdịiche dị ukwuu dị na ebe ndị a. Ụfọdụ ụdị alpine a na -ahụkarị bụ ewu ugwu ma ọ bụ ewu ọhịa. E nwere anụmanụ ndị ọzọ dị ka antelopes, marmots, ejula, nla na ihe ndị ọzọ na -adịghị ahụ anya. Mgbe ewepụrụ anụ ọhịa wolf, bea na lynxes n'ezie n'ihi iyi egwu mmadụ, ha na -alaghachi na Alps Switzerland. N'ihi nchedo ụfọdụ oghere eke, ọ na -adịrị ha mfe ibi ndụ.
N'ime osisi, anyị na -ahụ ọtụtụ ahịhịa ahịhịa na oke ọhịa nwere ọtụtụ osisi pine, osisi oak, firs na ụfọdụ ifuru ọhịa.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara Alps Switzerland na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Switzerland